मेरा श्रीमानले जति ग’र्दा पनि मलाई म:ज्जा आ:उँदैन ! म के गरौँ ? – Sidha Post 24
मेरा श्रीमानले जति ग’र्दा पनि मलाई म:ज्जा आ:उँदैन ! म के गरौँ ?
चु म्ब नप छि अन्य क्रियाकलाप जस्तै घाँ-टीह-रु-मा पनि चु-म्ब-न ग र्ने ज-स्ता क्रियाकलापले तपाईंंको पार्टनर छिट्टै मु-ड-मा आउँछिन् र यौ-न क्रियाकलापमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउँछिन् ।
तर, म हिलाहरुलाई भ-जा-इ-न-ल अ र्गे ज्म प्राप्त गर्न सजिलो छैन, किनभने यो कुनै नियम पुस्तक होइन, जसको आधारमा च र म सु ख प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै म हिलाहरुलाई केवल पे निट्रेस नले मात्र पनि च र म सुु ख प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
यी साधारण तरिकाहरुलाई अ पनाएर यौ न च र म सु ख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । यौ न क्रि या कला पको माध्यमबाट खुशी, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुछ भने यौ न पू र्व गरिने क्रियाकलापमा ध्या न दिनु आ व श्यक छ ।
यौ नस म्प र्क रा ख्नु अगाडि शारीरिक र मानसिक रुपमा आफू र आफ्नो पा-र्ट-न-र-ला-ई त यार गर्ने तरिकालाई फो र प्ले भनिन्छ । चु म्ब न, म सा ज गर्नु, पा-र्टनर-लाई क-से-र अं-गा-लो-मा बाँ-ध्नु जस्ता सबै कुराले तपाईंलाई यौ-न-का ला-गि तयार गर्न
नियमित सम्बन्ध राख्ने महिलाहरु यसरी चिनिन्छन्